Akụkọ - Otu esi etinye etemeete, mee ka ọ dị mfe na usoro 5 | Kalocils Mma
Nzọụkwụ 1: Moisturizer
Itinye etemeete bụ nka. Akpụkpọ ahụ dị larịị, nke dị nro bụ ihe kacha mma gị. Iji mee nke a, ịchọrọ moisturizer. Sichaa ihu gị wee tinye aka n'ụba, na -enye akpụkpọ gị nkeji ole na ole ka ọ gbapụta ude mmiri ma ọ bụ ịgba.
Nzọụkwụ 2: Primer
Primer na -enyere aka ịkwadebe akpụkpọ gị maka izobe ihe na ntọala, na -agba mbọ hụ na ha ga -aga nke ọma ma dịte aka. Ọ na -ezokwa ntụpọ ọ bụla ma belata visibilụ pore. Tee ihu gị na olu gị.
Nzọụkwụ 3: Pensụl nkuanya
Anya mara mma dị mkpa, mee ka ha jiri pensụl nkuanya pụta. Soro ahịrị ihu nke ihu gị site na iji ụcha dị ntakịrị karịa ntutu gị.
Nzọụkwụ 4: Eyeshadow, Eyeliner & Mascara
Nye anya na nkọwa na anya na ndo na liner. Jiri ndo anya anya atọ, bido na nke kacha dị ncha n'okpuru nkuanya gị wee bụrụ nke kacha gbaa ọchịchịrị n'elu mkpuchi gị. Ngwakọta ha iji zere ahịrị ọ bụla doro anya. Mgbe ahụ tinye ihe mkpuchi anya n'akụkụ mkpuchi ahụ dị n'elu lashes gị. Jiri mascara iji kpuchie ma kewapụ ihe niile na -adịghị mma, na -enye ha ọmarịcha ahụ ike.
Kwụpụ 5: Lipstick, Liner & Lip Gloss
Lipstick bụ otu akụkụ na -agbanwe agbanwe nke anya gị. Ị nwere ike ịgwakọta na dakọtara agba dabere na ọnọdụ gị, uwe gị ma ọ bụ ọbụna oge ụbọchị. Nọgide na -etinye mkpuchi lipstick wee debe egbugbere ọnụ gị, jiri akwa na -egbuke egbuke mechie.
Oge nzipu: Dec-26-2020
egbugbere ọnụ, eyeliner, Anya anya, Ndị na -ere ntutu anya, mink lashes, Mgbatị ntutu anya,